မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တရုတ်ခြေဖ၀ါးအောက်ရောက်အောင် ကျူးကျော်စစ် ၃ ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Qing ဆိုတဲ့ တရုတ်ဘုရင် ရဲ့ နာမည်ကို ဂုဏ်ယူ စွာနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ သူ Qing Minya တစ်ယောက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bangladesh-Myanmar Border Skirmishes: Who, What And Why – Analysis
လူမှုရေးအရှုတ်အရှင်းများ နဲ့ ငွေကြေးအရှုတ်အရှင်းများဖြင့် ရှုတ်ထွေးနေခဲ့သည့် အဆိုပါ Qing Minya ( ရှင်မင်းယာ ) »
Qing Dynasty ဆိုတာက တော့ ၁၇၆၅ မှ ၁၇၆၉ အထိဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ စီနို မြန်မာ စစ်ပွဲ (Sino_Burmese War) သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်ရဲ့ မြန်မာနိူင်ငံအပေါ် ကျူးကျော်စစ်ပွဲ မှာ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်အနိူင်ယူဖို့ ကြိုးပမ်း ခဲ့တဲ့ တရုတ်တွေပေါ့ဗျာ။မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တရုတ်ခြေဖ၀ါးအောက်ရောက်အောင် ကျူးကျော်စစ် ၃ ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Qing ဆိုတဲ့ တရုတ်ဘုရင် ရဲ့ နာမည်ကို ဂုဏ်ယူ စွာနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ သူတစ်ယောက်က မြန်မာလူမျိုး တွေကို ချစ်တယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်စေတနာထားတယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သံသယ ရှိကြောင်းပါ။photo credit _ Ko D Myo Chit
အမည်ရင်း မြမြခင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တာမွေမှာနေသည်။ တောင်မြင်းကွင်း လမ်း(Eleven Media ရုံးရှိသည့်လမ်း ) အိမ်အမှတ် ၁၃ ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားပြီး အမက(၁၈)တာမွေတွင်မူလတန်းတက်သည်။ ၈၈ အရေးတော်ပုံတွင် လေးတန်းကျောင်းသူဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆တွင် အထက(၃)တာမွေမှ ဆယ်တန်းအောင်သည် ။ဖခင်မှာ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်ဦး(ငြိမ်း) ဖြစ်ပြီး မထသ ဗဟိုရုံးမှ ဒုချုပ်ရာထူးဖြင့်အငြိမ်းစားယူသည်။ မိခင်မှာလည်း စစ်သူနာပြု ဗိုလ်မှူးရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစားယူသည်။ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာလည်း စစ်တပ်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တကယ့်စစ်တပ်မျိုးရိုးဖြစ်သည်။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဖြင့်ကျောင်းပြီးသည်။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း sinma furniture တွင်အလုပ်ဝင်သည်။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခန့်တွင် မလေးရှားသို့သွားရောက်ပြီး (Note: Malaysian Chinese) တစ်ဦးနှင့်အိမ်ထောင်ကျသည်။ မလေးရှားတွင် private school (? Kg) တစ်ခုဖွင့်ထားသည်။ 2013 နိုဝင်ဘာလkလမှစပြီး ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေသည်။
This entry was posted on June 28, 2014 at 7:34 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တရုတ်ခြေဖ၀ါးအောက်ရောက်အောင် ကျူးကျော်စစ် ၃ ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Qing ဆိုတဲ့ တရုတ်ဘုရင် ရဲ့ နာမည်ကို ဂုဏ်ယူ စွာနဲ့ အသုံးပြုနေတဲ့ သူ Qing Minya တစ်ယောက်”
June 28, 2014 at 7:53 am | Reply
Ong Harry မလေးရှာမှာရှိကတည်းက ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ post တွေက something wrong ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ blockထားတာ။
မင်း သား ကြီး မလေးရှားမှာမလေးတရုတ်နဲ့living togetherနေပြီးမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုလိမ်စားနေတဲ့ရခိုင်တရုတ်ကပြားမပါဒီးရေ
မင်း သား ကြီး အော်ပရာစီဝင်မယ့်သတင်းတွေကိုရောင်းစားတယ်မြန်မာတွေအဖမ်းခံရရင်မလေးရဲနဲ့ပေါင်းပြီးငွေညှစ်တယ်. ဒီကောင်မအလှူငွေတွေလိမ်တာများပြီ. သူအလှူလာခံရင်လုံးဝမလှူမိစေနဲ့.အဲဒီအလှူငွေတွေနဲ့သုံးဖြုန်းနေတာကြာလှပြီဒီး